पिस्कर विद्रोहबाट हामीले के सिक्यौं ? – Nepal Press
सन्दर्भः पिस्कर स्मृति दिवस
२०७८ माघ १ गते १०:०८
आज माघे संक्रान्ति अर्थात् मकर संक्रन्ति । आजदेखि दिन लम्बिने र रात छोट्टिने पर्वका रुपमा पनि यसलाई विशेषरुपमा मनाइन्छ । हो, पंचायती निरंकुशताका रातहरु छोट्याउन जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षलाई पनि स्मरण गर्ने दिन हो, आज ।
सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा तत्कालीन पञ्चायती शासकले सहिद ईले थामी र वीरबहादुर थामीको पासविक हत्या गरेको र जगतबहादुर बोहोरा, पल्कमाया थामी, सोना तामाङहरुले गोली खाएर पनि हिम्मतकासाथ लडेको दिन हो । हामी जब माघी आउँछ अनि पिस्करको प्रतिरोधी इतिहास र बलिदानले थपेको संघर्षका पहाडहरु सम्झन्छौ । आन्दोलनको विश्वविद्यालयले सिकाएका पाठहरु सम्झन्छौ ।
पिस्कर दमनको सबैभन्दा ठूलो पासविक रुप २०४० साल माघ १ गते बिहान ३ बजे देखियो । ३८ वर्षपछि पनि हामीले सहिद स्मृति दिवस मनाइरहेका छौं ।
पुरानो पिस्करमा अवस्थित महादेवथानमा प्रायः सबै धर्मावलम्बीहरुले आफ्ना परिवारका दिवंगत सदस्यहरुको नाममा बत्ती बाल्छन् । नाचगान गरेरै रात बिताउँछन् । खरिढुंगाको चिसो सिरेटो जलजलेहुँदै तौथलीका भित्ताहरुमा ठोक्किएर दाबी खोलासम्म पुग्थ्यो । जात्रालुहरु सुस्ताउने समय पारेर सयौं प्रहरीहरु जनसाँस्कृतिक कार्यक्रमस्थललाई घेरा हालिरहेका थिए ।
पिस्कर नदेख्ने र नटेक्नेहरु पनि दमनको शिकार भए । काठमाडौंको ताहाचल क्याम्पसमा पढ्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जागिर खाइरहेको म पनि तीन वर्ष नजरबन्दमा परें । पिस्कर दमनको समाचार सम्प्रेषण गरेकै कारण मैले जेल जीवन भोग्नुपर्यो ।
बर्सेनि हुने नाचगान त्योबेला अलि व्यापक गर्ने योजना थियो । पार्टीका नेता माधव पौड्यालले भूमिगत ढंगले नै संयोजन गर्दै हुनुहुथ्यो, कार्यक्रमको । उक्त साँस्कृतिक कार्यक्रमको उद्घोषण गर्न कर्थलीबाट बमबहादुर पौड्याललाई बोलाइएको थियो ।
कार्यक्रम सकिएपछि मञ्चमा पेट्रोलम्याँसको उज्यालो फैलिएकै थियो । प्रहरी एक्कासी मञ्चमै पस्यो । बत्ती निभ्यो । डाङडुङको आवाज आयो । महिला केटाकेटीको चिच्याहट सुरु भयो । प्रहरीको लाठी बज्रेको र अबोध नानीबाबुसहित सबैलाई अन्धाधुन्ध आक्रमण भएको सहन नसकी किसानहरु प्रतिरोधमा उत्रिए ।
वीरबहादुर थामीलाई टाउकोमै गोली हानी मारे । ईले थामीको पेटमा गोली लागेर रगतको आहालमा छटपटाउँदै गर्दा प्रहरीले नै डोरीले बाँधेर दाबी खोलातिर घिसार्दै लगे । सुनियो– घिटघिटो बाँकी हुँदै संगीनले रोपेर मारियो । खाल्डो खनेर गाडियो र स्याउलाले पुरेर हिँडे ।
गोली लागेका जगतबहादुर बोहोरा, पल्कमायाँ थामी, सोना तामाङलाई प्रहरीले समातेर डोरीले बाँधेर लामोसाँघु झारे । ५० भन्दा बढी पक्राउ परे । गाउँमा प्रहरी अपरेसन सुरु भयो । धेरै गाउलेहरु खरिढुगा, सैलुङ, कालिन्चोकका हिउँ छल्दै ओडारतिर लुक्न पुगे ।
बाख्रा, गाई, भैंसी दाम्लामै भोकै मरे । राति आएर घर बस्छन् भनेर घरै जलाइ दिए । पिस्करका थामबहादुर थामी पनि ज्यान जोगाउन भागे । हप्तौ फर्कन सकेनन् । उनकी गर्भवती श्रीमती खान नपाएर, पानी दिनेसम्म मान्छे नपाएर बितिन् । उनले जन्माएको बच्चा पनि जन्मनेबित्तिकै बित्यो । यस्ता दमनका फेहरिस्त लामो छ ।
छलफल साप्ताहिकका सम्पादक गोपाल थपलियाले यातनासहित जेल सजायँ भोग्नुपर्यो । अरुण नेपाल, मेघनाथ पौड्याल, क्षत्रबहादुर बोहोरा, कृष्णबहादुर बोहोरा, सावित्री बोहोरा, बेत्रावती पौड्याल, मानबहादुर थामी, सुनकुमार थामी, श्रीमान तामाङ, दिलबहादुर पौड्याल, दलबहादुर बोहोरा, पदम बोहरा, भोला बोहोरालगायत धेरै जेल परे ।
वीरबहादुर थामीलाई टाउकोमै गोली हानी मारे । ईले थामीको पेटमा गोली लागेर रगतको आहलमा छटपटाउँदै गर्दा प्रहरीले नै डोरीले बाँधेर दाबी खोलातिर घिसार्दै लगे । सुनियो– घिटघिटो बाँकी हुँदै संगीनले रोपेर मारियो । खाल्डो खनेर गाडियो र स्याउलाले पुरेर हिँडे ।
४–५ वर्षसम्मको जेलयातना, वारेण्टको कारण फरार हुनुपर्ने अवस्था र भाग्दै ज्यान जोगाउन हिँडेका सर्वसाधारणले पाएको दुःख, पिडाबाट नै सामन्तवाद कति क्रुर छ, प्रतिकृयावादीहरु कम्युनिष्टप्रति कति आतंकित छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न सकिन्छ ।
उक्त घटना सामन्तीसत्ताले परिवर्तनका पक्षधरमाथि गरिएको मध्ययुगीन बर्बरताको उदाहरण पनि हो । संघर्षमा जीवनको बाजी थाप्ने योद्धहरुले पार्टीको नीति निर्माणको तहमा पहुँच पर्याउन सकेनन् होला । तर के उनीहरुको आवाज नै थिएन र ? पार्टी संगठन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दामा कैयौं लडाकु कार्यकर्ताको योगदान बिर्सने छुट कसैलाई छ र ?
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्गीय लडाइँमा यो आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु जस्तो ठूलो भुल अरु हुन सक्दैन । पञ्चायती निरंकुशता विरुद्धको बलियो उदाहरण बनेको यो संघर्षले दिएको शिक्षा दूरगामी महत्वको छ ।
उक्तदमन र प्रतिरोधको इतिहासबाट प्राप्त शिक्षालाई नेपाली समाजको राजनीतिक मात्र होइन– आर्थिक, समाजिक रुपान्तरणको केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो । र फेरि पनि संभावनाहरु टरिसकेका छैनन् । जनताले निक्कै कष्टसाध्य मेहनतबाट बनाएको पार्टीलाई फुटाउन कांग्रेस माओवादीको सहयोग लिने जुन हर्कत भयो, त्यो स्वभाविक छैन ।
वर्गीय भावनाबाट च्युत हुने, आन्दोलनको मर्म बिर्सेर अवसरको पछि मात्रै कुद्ने, पद भनेजस्तो पाइएन भनेर पार्टी नै छाड्ने, नेतृत्वलाई गाली गरेर धम्क्याएर, घुर्क्याएर अवसर लिने संस्कार भएकाहरुले पिस्कर आन्दोलनबाट सिक्ने कुरा धेरै छन् ।
पिस्कर विद्रोहबाट पार्टी नेतृत्वले पनि सिक्नु पर्छ । पार्टी भावना भनेको के हो ? अवसर खोज्ने तर जनतामा नजोडिने, जनशैलीलाई बेवास्ता गर्ने, निर्णय गर्दा श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा नराख्ने, गलत स्वार्थ भएकाहरुको घेरामा रहने, सूचनाको स्रोत नै गलत हुने जस्ता थुप्रै समस्याहरु भएरै जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको भरोसा र विश्वासमा समस्या आउने हो ।
निस्वार्थ भावनाले सबैभन्दा पीडित वर्गले उठाएको बिद्रोह हो, पिस्कर आन्दोलन । समयको हिसाबले बितेका ३८ बर्ष थोरै होइन । तर उक्त आन्दोलनबाट हामीले अनुसरण गरेका र सिकेका कुरा भने असाध्यै थोरै हुन् ।
श्रद्वाञ्जलि महान शहिदहरुप्रति ! हार्दिक सम्मान– यो कष्टसाध्य आन्दोलनका अग्रजहरुमा !
प्रकाशित: २०७८ माघ १ गते १०:०८
One thought on “पिस्कर विद्रोहबाट हामीले के सिक्यौं ?”
सुमित्रा (भिछिभोया )राजबंशी says:
नेकपा एमाले बेक्ती बिषेश ले मात्र निर्माण भएको होइन l हजारौ शहीदको रगत लाखौ जनताको पसिना र नि स्वार्थ भाबना भएका नेता र कार्येकर्ता हरुको बलिदान बाट निर्माण भएको पार्टी हो तेसैले सहि बेक्ती सहि समय सहि स्थान मा पार्टी ले सम्मान गर्न सक्नु आजको आबसेकता हो 🙏🙏🙏